Christopher Kane - British designer, muvambi we eponymous brand of clothing. Kusvika iye zvino, chikwata chacho chakabudisa zvikamu zvitanhatu. Mukuwedzera, Christopher ndeyekuchengetedzwa kwaDonatella Versace uye anonzi ndiye musoro weimba yaVersace.
Christopher Kane - biography
Mumwe mukurumbira wekugadzira mafashoni akaberekwa musi waJuly 26, 1982 muScotland. Kufarira mune mafashoni emukomana uyu kwakazviratidza kubva paucheche. Panzvimbo pematayipi, Christopher akakumbira kutenga magazini iyo VOGUE. Akanga ari pedyo nehanzvadzi yake Temmi, uyo nhasi ari ruoko rwake rworudyi mukambani. Dzidzo Kane yakagamuchirwa muCentral Saint Matrins College yeArt and Design, iyo yakazodzidzawo vatongi vefashoni saStella McCartney, John Galliano naAlexander McQueen.
Muna 2006, Christopher Kane akakunda iyo yakakurumbira yeHarrods Design Award. Anozvigadzira pachake pakarepo achangopedza kudzidza kuchikoroji. Pakutanga kokutanga, muumbi wacho akaratidza mhemberero shoma yeonon, nokudaro achizivisa kutanga kwake.
Pakukumbira kwaDonatella Versace muna 2009, Kane ari kushanda pazera revechidiki.
Izvo zvitsva zvekugadzirisa Christopher Kane zvakazadzwa nezvisingatauriki nokuda kworudo rwake rworudo uye rudo. Chiedza chinopfeka nechosechine chigadziko chinorongedzwa nemiseve huru. Mifananidzo yakashata yakakonzerwa nemaputi, mashizha esimbi uye shangu mumucheka wesimbi.
Iyo minimalism yemakore makumi mapfumbamwe nemashanu inogona kutevedzwa munenge mifananidzo yose. High-tech michina inoshandiswa pakugadzirisa. Semuenzaniso, zvipfeko zvinogadzirwa zvechiffon yakamanikidzwa nemifananidzo yakajeka. Vafambi vomuchina uyu havashamisi nekuti micheka yacho yakashongedzwa nemapurasitiki e rubberized kana zvidimbu zvegetsi.
Zvipfeko Christopher Kane anosarudza kupfeka nyanzvi dzakawanda dzeHollywood - Kylie Minogue , Emma Watson.
Oksana Mucha's dresses
Vakashambadzirwa zvipfeko zvevakadzi
Fesita yeHed-Autumn-Winter 2016-2017
Jean naParaskeva - chitsva chitsva 2016
Zvigadzirwa zvejeri misumari 2015
Fashionable pedicure 2013
Pink pedicure - kusarudzwa kwekanakisisa mhinduro dzezhizha
Shoes - zhizha 2015
Vakadzi vanoyevedza mvura
Francesco Donni - chimiro cheItaly uye chic zuva rega rega
Vakadzi vakagadzirirwa zvipfeko 2014
Mucheka mutsvuku - mhando dzakanakisa dzehupenzi uye huni hwekugadzira
Tracheitis - Zviratidzo
Vhiki yechina yekusununguka - vatsigiri vebasa mukudzokorora
Ndezvipi zvidzitiro zviri nani kumeno?
Smear from the vagina
Mushonga akawanda chiratidzo
Ko jeans-boyfriends vanofanira kugara sei?
Floor lamp with own hands
Musha wemusha - mukati mukati
Imunda unotonhora - ungaita sei?
Pamwana wacho kutonhora 39 hakubvisi - chii chaunofanira kuita?
Mwoyo mumuchero wakamukira muto
Vakadzi vechikwata chekuita gym 2013
Ko ferns inowedzera sei?
Nzira yekuzvidzivirira sei kune vamwe vanhu vanoda kuziva?
Pink yakava amai kwechipiri
Nzira yekugadzirisa sei metabolism uye kurasikirwa nemutoro?